သင်ဟာခွေးတစ်ကောင်ကိုချစ်မြတ်နိုးတယ်ဆိုရင်၊ ထိုသို့ဖြစ်နိုင်သည် အကယ်၍ သင့်တွင်နေရာအလုံအလောက်ရှိပါက၎င်းကိုကြီးကြီးမားမားသင်လိုချင်သည်.
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ရှိခြင်းသည်အရုပ်မရှိသကဲ့သို့၎င်းသည်ခွေးကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်ပါကထိုထက်မကသေးပါ။ သင့်ကြွက်သားများကိုရွေ့ပြောင်းရန်အတွက်သင်၏အစားအစာ၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း၊ ရောဂါများ၊ လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်အပြင်ထွက်ခြင်းများနှင့်ဆက်စပ်သောစောင့်ရှောက်မှုနှင့်လိုအပ်ချက်များလိုအပ်သည်။
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ခွေးသည်အသက် ၁၈ လအထိရင့်ကျက်လာသည်။ အမိုးအကာများနှင့်အမိုးအကာများတွင်ခွေးကောင်ရေအမြောက်အမြားကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ သတ်မှတ်ထားသောဝတ်ရည်နှင့် Cross- ဖောက်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူ။ စင်ကြယ်သောသားမရှိသောမည်သူမဆိုအတားအဆီးမဖြစ်သင့်ပါ။ အခြားအရာများထဲမှတစ်ခုမှာအရည်အသွေးပိုရှိသောတိရစ္ဆာန်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အဲဒီမှာလည်းရှိပါတယ် ၎င်းသည်ခွေးပေါက်စဖြစ်သောကြောင့်ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကခွေးကိုမွေးစားခြင်း၏ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင်သူ့ကိုသင်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းဖြင့်သင်၏အလေ့အထများနှင့်သူ၏အနာဂတ်ဘ ၀ ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်သင်ကြားပေးနိုင်သည်။
အတော်များများကကျွမ်းကျင်သူများကဒီအာမခံ ခွေးကြီးတစ်ကောင်သည်သေးငယ်သောခွေးများထက် ပို၍ ပညာတတ်ပြီးလေ့ကျင့်ထားသည်။ သူတို့၏အရွယ်အစားသည်ဇာတ်ကောင်များစွာနှင့်တူညီသည်ဟုထင်ရသော်လည်းခွေးကောင်မလေးများသည်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအရလေ့ကျင့်မှုကိုပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
ကြီးမားသောခွေးများလည်းသက်သေပြနိုင်ပြီ သူတို့ကကြမ်းပြင်များနှင့်သေးငယ်တဲ့နေရာများမှကောင်းစွာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်ကလေးများနှင့်အတူနေထိုင်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်.
ခွေးကြီးတစ်ကောင် ၎င်းတွင်စွမ်းအင်များစွာရှိပြီး၎င်းကိုလောင်ကျွမ်းရန်လည်းလိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်အနေဖြင့်သင်၌ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ခုခံနိုင်စွမ်းရှိရမည်။ ဒါဟာဟန်ချက်ညီဖို့ပါ။ အခြားအမှုအရာတို့တွင်, လမ်းလျှောက်အပေါ်သင်သည်သူတို့၏အစွမ်းသတ္တိကိုထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
အစားအစာနှင့် ပတ်သက်၍ ခွေးကြီးများကပိုစားကြသည်၊။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လည်းအချိန်ပိုမိုလိုအပ်သည်။
ဓာတ်ပုံရင်းမြစ်များ - Dreamstime / အယ်လ်ပီးစ်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » အချိန်အား » ခွေးကြီးကောင်လေးမွေးစားချင်ပါသလား
ဒီ 'ပါတီရာသီ' ကိုသင်၏ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရန်နည်းလမ်းလေးမျိုး